व्हिस्की हन्टिंग - जापनको ओसाकामा व्हिस्की किन्ने ५ ठाउ | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > FOOD > व्हिस्की हन्टिंग – जापनको ओसाकामा व्हिस्की किन्ने ५ ठाउ
व्हिस्की निकै लोकप्रिय पिय पदार्थ हो। विश्वमा थुप्रै किसिमका र क्लासका व्हिस्कीहरु पाईन्छन। अहिले भने जापानको व्हिस्की विश्वसामु निकै लोकप्रिय हुदै आएको छ। व्हिस्की ग्रेन म्याशलाई ओकको काठको ब्यारलमा फ़र्मेण्ट गरेर बनाईन्छ। जापानी व्हिस्की बनाउने तरिका भनेको स्कच व्हिस्की बनाउने तरिका हो। जापानमा खोलिएको पहिलो डिस्टिलरि यामाजाकि डिस्टिलरि हो।
Photo by Shitota Yuri on Unsplash/
सन् २००७ देखि २०१४मा सन्तोरि र निक्काले अन्तरास्ट्रिय अवार्ड जितेका थिए। त्यसपछि भने जापानको व्हिस्की विश्वले रुचाउदै आएको छ। अहिले जापानमा मानिसहरु पुराना र यहाँ मात्र पाईने व्हिस्की लिनलाई आउछन। आज हजुरहरुलाई जापानको ओसाकामा यी बिरलै पाईने व्हिस्की किन्ने ५ ठाउ बताउनेछौ।
१. सन्तोरी यमाजाकी डिस्टिलरि
A post shared by ZENZO (@zenzo555) on Oct 27, 2018 at 3:35am PDT
यो डिस्टिलरि जापानको पहिलो डिस्टिलरि हो। यो १९२३मा स्थापना भएको हो। यहाँ हजुरले सन्तोरि व्हिस्कीको ईतिहासको जानकारी लिन सक्नु हुनेछ। यहाँ आउने पर्यटकहरुको लागि ३ किसिमको टुर हुने गर्दछ। १००० येन तिरेर हजुरले ८० मिनेटको जानकारी मुलक टुर लिन सक्नु हुनेछ। त्यसैगरी २००० येनको टुरको समय १०० मिनेटको हुदछ। यी दुवै टुरमा हजुरले यमाजाकी सिंगल माल्ट व्हिस्कीको स्वाद लिन सक्नु हुनेछ। अर्को टुर चाही पैसा पर्दैन। तर यो टुरमा गाईड र व्हिस्की चाख्न पाउने व्यवस्था हुदैन।
A post shared by Bogyeong Serah Kim (@ldner) on Jun 25, 2019 at 10:20pm PDT
यो ब्रुअरीको गिफ्ट सपमा हजुरले व्हिस्कीका बोतल, ड्रिङ्किन ग्लास र व्हिस्की संग मिल्ने स्न्याकहरु किन्न सक्नु हुनेछ। यो पसलको हाईलाइट भनेको ३०० ml यामाजाकी सिंगल माल्ट व्हिस्की हो। यो बोतल, यहाँको गिफ्ट सपमा मात्र पाईन्छ। गिफ्ट सप माथि रहेको टेस्टिङ्ग काउण्टर छ। त्यहाँ हजुरले सानो टेस्टर किन्न सक्नु हुनेछ। यहाँ हजुरले बिरलै पाईने वा किन्न नसकिने महँगो व्हिस्कीको सानो टेस्टर साईज पाउनु हुनेछ। यी मध्य यामाजाकी १८ (१८ वर्ष पुरानो), २५ वर्ष पुरानो वा ३० वर्ष पुरानो हिबिकी व्हिस्की पाउन सक्नु हुनेछ।
खुल्ने समय : १० बजे देखि ४:४५ बजे सम्म।
२. बिक क्यामेरा
Japanese Whiskey. 30 year Hibiki, $100 an ounce. #biccamera #canttellyouexactlywhere #secretdrop #japanesewhisky #imdrinkingbeer
A post shared by Hi, My Name is John (@jdubhawaii) on May 22, 2019 at 8:26pm PDT
बिक क्यामेरा ईलेक्ट्रोनिक सामानको लागि निकै ठूलो स्टोर भनेर चिनिन्छ। तर यसको ब्राण्डिङ्गले नझुक्किनु होस्। यहाँ हजुरले ईलेक्ट्रोनिक सामान बाहेक अरु थुप्रै कुरा हरु पाउनु हुनेछ। आफुलाई चाहिने ई – टोय्स किनेपछि भुई तल्लामा रहेको स्टोरमा हेर्नुहोस। हजुरले त्यहाँ मेक अपको सामान देखि अनेक थरिका पिय पदार्थ पाउनु हुनेछ। यहाँ सामान्य स्टोरमा पाईने व्हिस्कीहरु राखिने भएपनि पनि हजुरले कुनै कुनै व्हिस्की अरु स्टोरमा भन्दा निकै सस्तोमा पाउनु हुनेछ।
खुल्ने समय : १० बजे देखि ९ बजे सम्म।
BIC Camera Namba Store Website
३. ला केभ डे यामाया (यामाया नागाहोरिबाशी सप )
A post shared by Evgenia Pshenichnaya(Lebedeva) (@pshenichnaya_evgenia) on Apr 15, 2017 at 7:01am PDT
यदि हजुर पेय पदार्थको सुपरमार्केट खोज्दै हुनु हुन्छ भने ला केभ डे यामाया नछुटाउनुहोस्। यहाँ स्टकमा राखिएको अनेक किसिमका अल्कोहल मध्य कुनै न कुनै हजुरको टेस्ट संग मिल्ने पक्कै हुनु पर्दछ। यहाँ हजुरले बीअर देखि हार्ड ड्रिङ्क , सस्तो देखि महँगो, अन्य स्न्याक्स सबै थोक पाउनु हुनेछ। आफ्नो लागि होस् या कोशेलीको लागि होस् यो पसलले हजुरको व्हिस्कीको खोजि पुरा गर्नेछ। त्यसैगरी यो चेन स्टोर भएकोले गर्दा हजुरले यहाँ युनिक र बिरलै पाईने केहि व्हिस्कीहरु नभेटे पनि कहिले काही हजुरले खोजि रहेको १८ वर्ष पुरानो सन्तोरि व्हिस्की भने कहिले कहिँ पाउन सक्नु हुनेछ।
Yamaya Nagahoribashi Shop Website (Japanese)
कुरोमोन बजार ओसाकामा फ्रेश सीफुड किन्न निकै लोकप्रिय ठाउ हो। यहाँ हजुरले १०० येन देखि फल फुल, माछा, मासु किना सक्नु हुनेछ। टन्न खाईसकेपछि यदि हजुर संग समय छ भने कुरोमोन बजारको साईड स्ट्रीटतिर लाग्नु होस्। यहाँ हजुरले एउटा निकै सस्तो स्टोर भेट्नु हुनेछ। यो स्टोरको नाम कावासाकिया हो। यो तेती ठूलो स्टोर भने होइन। तर यहाँ हजुरले पुराना व्हिस्की भने पाउन सक्नु हुनेछ। २०१६मा यो स्टोरले १७ बर्ष पुरानो हिबिकी र १२ वर्ष पुरानो यामाजाकी बेच्ने गरेको भन्ने जानकारी आएको थियो। म २०१७को नभेम्बरमा यहाँ जादा यामाअजाकि र सन्तोरिका व्हिस्की हरु पाएको थिए। यो पसलको वोनरले यी बिरलै पाईने व्हिस्की आफ्नो हातमा पर्ने बित्तिकै स्टकगरेर राखने बताएका थिए। तर धेरै खुसि नहुनुस हजुरले यहाँ २५ वर्ष पुरानो यामाजाकी व्हिस्की भने पाउनु हुनेछैन।
Kawasakiya Website (Japanese)
५. लिक्कर माउण्टेन \_
＼ 本日4/16(火) 新店舗OPEN！ ／
Posted by リカーマウンテン on Monday, 15 April 2019
यो पसल सन् १९९०मा स्थापना गरिएको हो। अहिले यो चेन स्टोर बनेको छ। यो जापानको ३१ प्रान्तमा फैलेको छ। यो स्टोरले जापानी देखि बिदेशी अल्कोहल पनि राखेन भएकोले गर्दा यहाँ हजुरले थुप्रै रक्सीका ब्राण्डहरु देख्न सक्नु हुनेछ। २५ वर्ष पुरानो यामजाकी पाउन यहाँ पनि मुस्किल भए पनि हजुरले यहाँ विश्वभरका व्हिस्कीहरु पाउनु हुनेछ। शिनसाईबाशिमा रहेको स्टोर अझ बिशेष छ किन भन्दा यो राति धेरै ढिलो सम्म खुल्ने गर्दछ। ओसाका घुमेर थाक्नु भएको छ भने राति होटल फर्किदा यो पसल बाट आफुलाई मन मन पर्ने ड्रिङ्क लिनु होस्। ओसाकामा मात्रै यो पसलमा थुप्रै चेन स्टोर रहेका छन्।
Liquor Mountain Website